Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ụmụaka nwatakịrị a na-akpọ Raheem Akụkọ Gbasara Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; 'Whizzkid'. Anyị Raheem Sterling Child Akụkọ Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha Raheem Sterling gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-ele Raheem Sterling Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Akụkọ nwatakịrị Raheem na-eto eto - Ndụ Mmalite na Ezinụlọ:
Raheem Shaquille Sterling mụrụ na 8th ụbọchị nke December 1994 na Kingston, Jamaica site na nna na nne a na-amaghị ama, Mrs Nadine Sterling. Nna ya anọghị n'oge ọmụmụ ya. Akwụkwọ ọmụmụ ọmụmụ Raheem enweghị nna ọ bụla. Aha nna ya sitere na onye mmekọ Nadine gara aga Errol Sterling.
Njem ya na otu n'ime egwu egwu kachasị egwu na football malitere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 5,000 kilomita na mpaghara dị egwu nke Kingston, Jamaica, ebe o bi n'oge ọ bụ nwata.
Ọ bụ ogologo oge site na mmalite ya na Maverley, Jamaica - obodo na-enweghị ebe ndị omempụ na-achịkwa. ọ bụ 'otu n'ime ebe a na-enweghịkarị agwaetiti niile', dị ka otu onye na-ede akụkọ Jamaica si kwuo. 'O nwere obodo ghetto pere mpe na-enweghi ihe ndi ozo ma na-agbali igbochi mpu egbe'. Raheem dị ka nwatakịrị ga-egwuri egwu ruo awa asatọ n'ụbọchị, na-akwụsị nanị mgbe ọ nụrụ ụda egbe - ihe ịrịba ama nke ọgba aghara.
Mgbe ọ dị afọ isii, Sterling kwagara Britain wee biri na mama ya n'otu n'ime ala kachasị sie ike na London. Akụkọ ya dị ịrịba ama bụ ihe atụ dị ebube banyere otu ndị nne na nna, ụlọ akwụkwọ na klọb bọọlụ nwere ike isi jikọta iji gbanwee ikike egwuregwu ka ọ bụrụ ihe ịga nke ọma ọbụlagodi ọnọdụ kacha sie ike.
Raheem Sterling nke Mentor, Chris.
Dabere na Chris Beschi, onye nkuzi ya na Vernon House Special School, “Ọ bụ ihe akaebe na ike ya na omume nkwado ya nke dugara ya imezu nrọ ya”
Tupu ịga Ụlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Ụlọ Akwụkwọ Veron, Raheem gbanwere ụlọ akwụkwọ n'ọtụtụ oge. "Ọ bịara Vernon House n'ihi na ọ nwere nsogbu na isi ụlọ akwụkwọ praịmarị na omume ya," kwuru Beschi. ''O doro anya na ọ bụ nwatakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ nwere ụdị obi ụtọ na obi ọjọọ banyere ya. O nwere obi uto nke ga-adaba na iwe mgbe ufodu.
Beschi gbakwunyere: 'Echetara m na-agwa ya dị ka afọ 10, “Ọ bụrụ na ị gaba n'ụzọ, ị ga-erule mgbe ị dị afọ 17, ị ga-egwu egwuregwu bọọlụ England ma ọ bụ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ. Ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ikwu na echeghị m na ọ bụ oge dị mkpa maka ya, mana echere m na ọ bụ eziokwu. Agaghị enwe ọnọdụ dị n'etiti ya. Ọ gaghị abụ onye ọ bụla na-arụ ọrụ ụgbọ ma ọ bụ onye ọrụ. Ọ na-aga ịdị ịrịba ama mgbe niile.
Ụmụaka nwatakịrị a na-akpọ Raheem Akụkọ Gbasara Ihe Nkọwa: Malite Ọrụ
Sterling bụ nwatakịrị nwoke hụrụ ọdịnihu ya ọbụna dịka ya na ndị na-eto eto nwere nsogbu nọ na nwata. Ọ bụ ezie na Beschi bụ Chineke zitere na ndụ ya. Ya na Sterling ga-aga ije otu izu kwa izu, gafee ụlọ ahịa, iji see foto nke saịtị ụlọ nke mechara bụrụ football kachasị ama na Great Britain.
O were ogologo oge karịa etu esi atụ anya mana mana, n'anya Sterling, a rụchara Stadium Wembley ọhụrụ. Ogige akara ngosi wee bụrụ ebe ọ na-arụ ọrụ egwuregwu bọọlụ ya, nke a na-ahụ site n'ụlọ ya na ala St Raphael na Neasden, n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ London.
Sterling mere mkpebi buru ibu nke ghọrọ ihe ntụgharị maka mmalite ọrụ. O kpebiri ịhapụ ndị omempụ ka ha soro ndị enyi ọhụrụ nwere ụdị egwuregwu a na egwuregwu bọọlụ na Copland High School nke dị nso na Wembley dị nso.
Mgbe ọ dị nanị 10, Sterling na-egwu bọl abụọ kwa ụbọchị n'ụlọ akwụkwọ. Dị ka otu akwụkwọ si kwuo, 'Raheem Sterling abụghị naanị nkà dị ka nwatakịrị. Ọ maara otú, mgbe ịgafe na otu esi agaghachi azụ nke, maka nwata nke ọgbọ ya, bụ ihe a na-ekweghị ekwe. Ọ ga-enweta echiche site na bọlbụ football nakwa na ya. Ọ nwere ụkpụrụ omume dị ukwuu nke ọtụtụ ụmụaka ndị ọzọ na-emeghị.
Sterling gosipụtara talent ya mara mma maka Alpha na Omega Youth Football Club na mgbede na ngwụsị izu. Nke a egbughi oge tupu QPR were ya gaa na Center of Excellence ha.
'E nwere ezi ihe na ihe ọjọọ na otu ahụ,' kwuru na onye nduzi nke ụlọ ọrụ ihe omume QPR Steve Gallen kwuru. 'Ihe ọma bụ Raheem na ndị ọjọọ bụ ndị ọzọ so n'òtù ahụ. Egwuregwu ga-emecha 6-5 na Raheem gaara enweta ihe mgbaru ọsọ ise ebe ndị ọzọ hapụrụ isii. Steve Gallen kwukwara. Ọ natara aha aha "Raheem Park Rangers", n'ihi ike ya iji merie egwuregwu.
Ụmụaka nwatakịrị a na-akpọ Raheem Akụkọ Gbasara Ihe Nkọwa: Nnweta Liverpool
'M lụrụ ọgụ dị ka onye nzuzu iji debe ya ma ekwenye m na ọ gaghị,' kwuru Gallen, 'M nọ ya na nne ya nso, onye bụ nwanyị mara mma. Mana n'oge ụfọdụ, onye ọ bụla na-atụ egwu na n'oge na-adịghị anya, a ga-eresị ya nnukwu klọb.
Manchester City na Chelsea, Arsenal na Liverpool gbara ya gburugburu dị ka sharks. Mana na njedebe, Liverpool nwere ihe ịga nke ọma ịchekwa afọ 15 na azụmahịa m 1million. Ọ hapụrụ London na ndị mụrụ ya gaa Merseyside. Mgbe ọ nọ na Liverpool, ọ gara n'ihu na agụmakwụkwọ ya na Rainhill School na St. Helens. O nwere ike ijikọ ma football na ọmụmụ ihe. Ma gị ma gị maara na ọ dị mma na Liverpool.
Ụmụaka nwatakịrị a na-akpọ Raheem Akụkọ Gbasara Ihe Nkọwa: Ndụ Ezinụlọ
Ndụ ezinụlọ nke Raheem Sterling jupụtara na nhụjuanya, olileanya, ntachi obi na mmeri ikpeazụ. Ugbu a, anyị na-enye gị nkọwa gbasara ndị otu ezinụlọ Raheem Sterling.
NME: E gburu nna ya na-anọghị na ambush na Jamaica mgbe Sterling dị afọ itoolu. Ruo oge, Sterling na-eme ka ụbọchị ahụ nwee nsogbu site na ọdachi ezinụlọ ya. A chọtara nna ya nwụrụ anwụ n'èzí ụlọ nke papa ya na Kingston, Jamaica - obodo nke ndị omempụ na-eme ihe ike. N'okpuru ebe a bụ ihe osise na-egosi ọnọdụ ọnwụ ya.
Ọnwụ nna nke Raheem Sterling - Akụkọ zuru ezu.
Otu enyi ezinụlọ gosipụtara: “Papa ya hụrụ ya n'anya nke ukwuu. Ọnwụ ahụ hapụrụ Raheem ka ọ ghara ịla n'iyi na ezinụlọ ya na-agba mbọ ogologo oge iji nweta ya. "
Obi abụọ adịghị ya, ọnwụ nna ya bụ ọdachi nke gosipụtara ihe kachasị njọ n'oge ọ bụ nwata.
Nne: Raheem Sterling nne bụ onye onye na-edozi isi na-emesị na-arụ ọrụ mgbe nwa ya nwoke mere ka ọ bụrụ onye na-eme ka ọ mara. Nadine Clarke Sterling mere ka o doo anya na ọ dị mpako n'ịzụlite nwa ya bụ Sterling ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu.
Nne Raheem na-atụ egwu-Nadine Clarke.
Ọ na-ede akwụkwọ na Facebook ya ozugbo: "Obi ụtọ Ụbọchị Nna m nye onwe m. Abụ m mama na nna. "
Nadine Clarke Sterling nyere aka na ịkwaga Raheem na London iji wuo ndụ ka mma maka ya na ọrụ ya. She buru ụzọ gawa England na-ekele ma enweghị ike iwe Raheem. O kwere ka ndị ikwu ya lekọta ya mgbe ọ nọ na England iji kwadebe ala maka ọbịbịa nwa ya.
IHE: Mgbe nna Raheem Sterling nwụsịrị, nwanne ya nwanyị nke okenye bụ Lakima kpọọrọ ya zoo ọtụtụ ọnwa site n'aka ndị mwakpo ahụ. Tupu ọ gaa England, Raheem nọrọ na nwanne nne nne ya aha ya bụ Gran Joy Morris bụ onye mechara kwaga Canada.
Ndị ikwu Sterling dara ogbenye ịzụta ya bọl - yabụ kickabouts mbụ ya n'ụlọ ha ji katọn ihe ọ juiceụ juiceụ kama bọọlụ.
Dị ka nwanne mama ya si kwuo: “Ndụ ya adịghị mfe. Ọ bụụrụ ya ebe siri ike ka o too. Ọ dị nkọ dị ka nwata. Anyị enweghị ọtụtụ ego mana anyị bụ ezigbo ezinụlọ nke nyeere ibe ha aka n'ịzụlite Raheem. Hishụnanya ya maka football sitere na igwu egwu n'ihu ụlọ nna ya mgbe ọ dị afọ atọ. Football bụ n'ụzọ doro anya na nnukwu ịhụnanya ya. Nke a bụ ihe mere nne ya ji arụsi ọrụ ike ehihie na abalị iji jide n'aka na ọ kpọgara ya England. "
Ezigbo ezinụlọ Raheem nile nwere okwukwe n'ebe ọ nọ site na mgbe ọ hapụrụ England. Ha na ya na-agwa ya ihe niile ka ọ na-aga n'ihu na ọrụ ya. Ọ dịghị mgbe ọ hapụrụ ha. Ha nwere obi ụtọ mgbe Brendan Rodgers nyere ya ohere ibili na ama. Nke a bụ oge wetara ihu ọchị n'ihu ha dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru. Raheem enyerela onye ọ bụla n'ime ezinụlọ ya aka inweta ego. Ha nile ahapụla Jamica na mba dị iche iche ha họọrọ. N'okpuru ebe a bụ foto nke ezinụlọ ya na mama ya.
Foto Raheem nke Ezinụlọ.
Paige Milian na Raheem Sterling Love Akụkọ nke:
Raheem Sterling bụ nna nke ụmụ abụọ. Nwa ya nwoke na nwa ya nwanyị, Melody Rose mụrụ na 2012 mgbe mmekọrịta dị mkpirikpi.
Sterling dere obi ya na ihe nlereanya ya Paige Milian mgbe ọ ka nọ na QPR. Ha abụọ nwere nwa mbụ ha, Melody Rose tupu Sterling aga Liverpool.
Nwanyị Raheem Sterling, Paige Milan- Akụkọ Na-adịghị Agbanwe.
Ọzọ, tupu ya akwaga Liverpool, ha nwere nkewa ma wee laghachi mgbe ndị England na-aga Liverpool.
Nwanyị nwanyị ogologo oge na ihe nlereanya Paige Milian nwekwara nwa nwoke a na-akpọ Thiago onye a mụrụ na Manchester ebe nna ya na-egwu bọl.
Na-elekọta Raheem na-achị ọnwa ọ bụla ma na-aṅụrị ọṅụ ka ọ na-ahụ maka ịbịarute nwa ya nke mbụ. Ọ nọ na-abịa site na ọmụmụ ma nyeere Paige aka n'ọrụ.
Nwa Raheem Sterling, Thiago Sterling.
Ọ dịghị onye maara ihe kpatara eji akpọ nwa ahụ Thiago - ọ bụghị aha ezinụlọ kamakwa dịka otu isi si kwuo ya, aha ya bụ na Raheem na Paige nwere mmasị na ụda nke.
Raheem Sterling na-ahụ n'anya ụmụaka. Ọ na-achọ ka ya na nwa ya nwanyị na nwanne ya na-enwe ihu ọma.
Nwa nwanyi Raheem, Melody (Aka nri) na nwa nwanyi (n'aka ekpe).
Ụmụaka nwatakịrị a na-akpọ Raheem Akụkọ Gbasara Ihe Nkọwa: Ịjụ Nwaanyị ya
Mgbe ugha gbanwee 22, Paige ketara foto nke di na nwunye ahụ nọ n'ocheeze nke nwere nkọwa: "Obi ụtọ na ndbọchị ọmụmụ nke iri abụọ na abụọ nke MMA hụrụ gị n'anya ọtụtụ nde @ sterling22."
Mba England na-emeghachi omume n'ụzọ obiọma, mana ọ tụrụ aro na ọ pụkwara bụrụ ihe ọchị onwe ya na okwu ya: "Jheeze enwetara m aha ugbu a Yh love u me nwunye."
Hemụaka Raheem na-akọ akụkọ banyere Eziokwu - Lgha na atinggha andgha:
Raheem Sterling gwara otu nwatakịrị nwanyị 18 mgbe ọ gbagara n'ụlọ obibi Jamaica ya 1million na mmekọrịta ya na enyi nwanyị ya bụ 'Ọ dịghị mkpa', ka isi iyi kwuru.
Ọ kpaliri Elise Wagstaff na nwanne ya nwaanyị Elene na Caribbean hideaway mgbe enyi ya nwanyị bụ Paige Hansel nọ na ezumike dị iche iche na Crete. Uzo ahu weputara foto ndi gunyere ego, ugbua onwe ha, ugbua nke ndi isi na otutu ihe ndi ozo na-egosi ha ka ha noo n'osisi mmiri mgbe ha na-acho onyonyo.
Nsogbu Raheem Sterling.
Tergha na-anọghị ya nso na-achụ nwa ahụ ruo ọtụtụ ọnwa tupu ya emechaa mee ka ya na ya nwee mmekọrịta. Ọ na-agbazi ego £ 180,000-a-izu na ya.
Ka ọ dịgodị, ka nke a mere, Page fọdụrụ na-eme ememme ụbọchị ọmụmụ ya na Gris nanị. Dị ka otu akwụkwọ si kwuo, 'Mgbe Raheem nọ na LA na Jamaica ọ nọ na Krit na ezumike. Ọ ghaghị ịjụ ajụjụ kpọmkwem ihe ọ pụtara Raheem mgbe ọ ga-aga nnukwu ego iji hụ nwa agbọghọ ọzọ, ' ka akwụkwọ ahụ kwuru.
Isi iyi ahụ gosipụtara na e nweelarị 'onwu'n'etiti Elise na Sterling ruo oge ụfọdụ, ma ọ na-edebe ya na ogwe aka' ogologo. Ndụ a yiri nke Karim Benzema, Ryan Giggs, Edinson Cavani, Cesc Fabregas na Anthony Martial. Ọ dị nnọọ iche na ndụ nke Roberto Firmino, Alex Oxlade Chamberain, Marcus Rashford na Davide Zappacosta.
Eziokwu Raheem Sterling Tattoo:
Ogbugbu aka ya na-enye ụma ya ụkọ maka ọrụ ya n'iwebata ya
nsogbu nwata. Ntughari nke bicep na-agụ: "Ana m ekele gị maka ọnwa itoolu i buru m, site na ihe mgbu niile na nhụjuanya."
Ọnwụ ọzọ na-egosi ihe osise nke nwa ya nwanyị ọ hụrụ n'anya Melody, onye a mụrụ mgbe ya na enyi nwanyị nwanyị bụ nwata mụrụ obere oge. Ọnọdụ ọzọ nke ngosipụta ya sitere n'ike mmụọ nsọ site n'oge ọ bụ nwata na ọdịda anyanwụ London.
Aka Raheem nwere ihe osise nke nwata nwoke 10 na-ele anya na ihe ijuanya na ogwe ama ama Wembley Stadium, tinyere okwu a: “Ọ bụ nrọ ịhụ ihe Wembley ghọrọ taa. M na-eguzo ọtọ hụ ụlọ ya dị ka obere nwa. Achọrọ m mgbe niile - igwu egwu England ma bụrụ onye kachasị mma m nwere ike ịbụ dịka ndị ịgba egwu bọọlụ. ”
Ala a ma ama bụ nnukwu Isi mmalite sitere n'ike mmụọ nsọ maka Raheem Sterling.
Raheem Sterling Biography Eziokwu - Ọ ka na Jamaica na-ejikọta:
Nleta nleta na-eleta Jamaica ka ọ hụ ma kwụsie ike n'akụkụ ụlọ ya nke na-anaghị akwụsị iri ego ya. N'oge ụfọdụ, Raheem na-atụpụ ọtụtụ puku pound na pals ya ochie. Ndị a bụ ndị enyi maara ya n'oge nsogbu ya n'oge gara aga.
Raheem Sterling Origin- Iso ndi Enyi Jamaica soro.
Hemụaka nwatakịrị a na-akpọ Raheem akụkọ gbasara Eziokwu - Okwu Iwu:
Na 8 August 2013, e jidere Sterling n'ihi mmegide a na-akpọkarị na enyi nwanyị mbụ ya, ihe nlereanya. A chọpụtaghị ya ikpe na Ụlọikpe Magistrates na Liverpool na 20 September, mgbe onye ahụ mkpesa ahụ enweghị ike inye ihe akaebe na-egosi.
Ọchịchị Iwu Raheem Sterling.
Ọnwa ole na ole tupu mgbe ahụ, na 20 May 2013, a kwụsịrị ebubo nke mwakpo a wakporo nwanyị dị iche dịka a ga-amalite ikpe ahụ mgbe ndị akaebe abụọ ahụ na-abịaghị na ndị ikpe ahụ enyeghị ihe akaebe ọzọ. Thelọ ikpe kwụrụ ụgwọ iwu Sterling n'okwu ikpe mbụ.
Raheem Sterling Siga Ahụma:
N'April 2015, Sterling ka e sere foto Nkiri Sunday na-ekwu na ị na-ese anwụrụ shisha, na-ekwukwa na ị na-a itsụ oxide nitrous maka nzube ntụrụndụ.
Ndụ Raheem Sterling - Sm Smụ Sịga.
Nke a bụ ihe Manager Brendan Rodgers gwara ya, “Echeghị m na ọ bụ ihe ị kwesịrị ịdị na-eme, ọ dị mfe dịka nke ahụ… Ndị na-eto eto na-emehie ihe. Ọ bụrụhaala na ha ga-amụta ihe n’aka ha, nke ahụ bụ ihe dị mkpa. ” Ụdị ndụ a yiri nke Mario Balotelli.
Hegbọ ala Raheem Sterling:
Ọ nwere Bentley GTX 700-4 nke ọ nwetara maka ,500,000 XNUMX. Ọ nwetara ụgbọ ala iji copyomie onye isi ya nwere Bentley yiri ya.
Audi S6 nke o nwetara maka £ 55,000. Onye na-eji zippy eme ihe ekwesịghị inwe nsogbu ọ bụla n'ime ụgbọ ala a nke nwere ikike nke 0-62mph dị ka 4.4 sekọnd. Nke a bụ ụgbọ ala zuru oke ma ọ bụrụ na Raheem na-agafe oge maka ọzụzụ.
Raheem Sterling si Audi S6.
O nwere oghere White Rover Sport nke o nwetara maka £ 49,500. Na 2015, a hụrụ ya ka ọ na-akwọ ụgbọala na tiketi ụgbọala na-echekwa na-agbanye na windo ya.
Raheem Sterling's Range Rover Egwuregwu.
Mercedes C63 nke o nwetara maka £ 20,000. Ụgbọ ụgbọala nke Ster kacha agba ọsọ n'enweghị obi abụọ ọ bụla. Mercedes C63 mere 0-60mph na sekọnd anọ.
Raheem Sterling nke Mercedes C63.
Ọ nwere ụgbọala Smart nke ọ nwetara maka £ 12k. Nke a bụ ụgbọ ala ya dị ala site na kilomita obodo.
Hegbọ ala Smart Raheem nke Sterling.
Dika akuko si kwuo, Sterling nwere obi uto ighota ugbo ala ya kwa ubochi n'izu n'uwa ihe di nma nke oma.
Helọ Raheem Sterling:
O mebiri X XUMUM ozugbo site na ugwo nke ulo a o na - acho ire ya, ebe ulo ya a haziri emezi ka na - adighi adighi adọtara ndi zụrụ ahia.
Ụlọ nke Raheem Sterling
Nnukwu ụlọ mmadụ buru ibu dị na Birkdale, Merseyside, nwere ọtụtụ atụmatụ pụrụ iche gụnyere ọkụ na-acha uhie uhie na kichin na ọnụ ụlọ 'Michael Jackson' zuru oke na minibar.
Sterling, 21, na-achọ ozugbo ịlele ihe Rightmove kọwara dị ka a “Ime-anọ detached ụlọ” maka £ 1.2million mgbe ọ gafesịrị Liverpool na Manchester City maka £ 49million.
Ndụ Raheem Sterling (Nlele Anya).
Hemụaka nwatakịrị a na-akpọ Raheem akụkọ gbasara ihe omuma - Njehie Man City:
Agbanyeghị, ọkwa banyere ịbinye aka emeghị ka ọ pụta ìhè. Nke mbu, enwere (otutu) ịkwa emo nke £ 49m ụgwọ. Mgbe ahụ, e nwere eziokwu ahụ weebụsaịtị ha enweghị ike ijikwa nrụgide ahụ. Ma mgbe ahụ, e nwere onye na-ekwu okwu a zuru oke na ndepụta Twitter ha. Ha edepụtaghị aha ya nke ọma.
Njehie Twitter nke Man City.
N'ụzọ doro anya, ehichapụ tweet ahụ ozugbo ndị ọrụ Twitter na-achị ọchị gosipụtara mperi ahụ. Agbanyeghị, nke ahụ abụghị njedebe nke ara ahụ. Ha na RAHE wee gaa:
Njehie Obodo Man 2.
Ọtụtụ ijeri ndị ọrụ Twitter ???
Uche, ndị na-agba ịnyịnya nwere ike ịgụta ihe ruru anọ - ọnụ ọgụgụ wiil na ụgbọ ala.
Ndewo Bob. Daalụ maka nzaghachi gị. Anyị emeela mgbazi.